Qeyl-dhaan ka soo yeertay safaarada Soomaalidu ku leedahay Uganda-Kampala - Somnieuws.com
Muddooyinkii u dambeeyey waxaa soo kordhayay cabashada ka imaaneysa Soomaalida ku dhaqan dalka Uganda, iyada oo cabashada dadkaasi ku jiheysan tahay qaar ka mid ah howlwadeenada safaaradda oo lagu eedeynayo in aysan dadka safaarada u yimaada in loo fududeeyo adeegyada ay u baahan yihiin kala kulmaan eex, laaluush & nin jecleysi.
Khadra Xassan Diiriye oo ka mid ah jaaliyada Soomaalida Uganda, oo la soo xiriirtay warbaahinta maxaliga ah ayaa ku nuuxnuuxsatay in dowladnimada ay u taqaan adeeg bulshada loogu qidmeynayo balse marka la eego sida Soomaalidu ay ula-falgasho dowladnimada ay tahay in si qaawan oo waadix ah loogu shaqeysto magacii dowladnimada.
“Marka Dowladnimada noqoto maqaaxi u furan qolo gaar ah, oo isku haleynaya ama ku daaban shaqsiyaad xilal sare dowladda ka haya, sida ay doonaana ay ugu takri falaan magacii & haykalkii dowladnimada, waxa ka dhalan kara waa cawaaqib xumo” Ayeey tiri Khadra Xassan, waxayna eedeyn u jeedisay Safiirka Cali Maxamuud Maxamed [Cali Cagabaruur] oo ay ku tilmaantay in aanu u qalmin xilka uu hayo.
“Waxaan xog-ogaal u ahay waxa safaaradda ka socda. Wasaarada arrimaha dibedda waxaa tegi kara darawalka Cali Caga-baruur iyo naag madow oo safaarada secretery u ah, e-mail-ka safaarada waxaa haya gabadha Ugandheys-ka ah, waana mamnuuc in qof ajnabi ah loo dhiibo xog safaaradeed” Ayeey tiri Khadra, waxayna intaasi raacisayu in ku-xigeenka safiirka Faysal Cabdi Macalin oo ay walaalo yihiin Seynab Macalin, waxaa laga dhigay in xilkaasi loogu dhiibay inuu ilaalo ka noqdo lacag Madaxweyne Farmaajo & xaaskiisa ay ku darsadeen warshad sokor ah oo ay leedahay Aamino Xirsi Mooge,
“Dadku waxay isweydiinayaan siddee ayeey ku dhici karta in 2 ruux oo isku reer ah ay safaarad ka noqon karaan safiir & safiir ku-xigeen.? Ayeey tiri Khadra, waxayna ka dalbatay R/Wasaare Rooble inuu wax ka qabto musuqmaasuqa hareeyay safaaradda.
Khadra waxaa kale oo ay sheegtay in dhowaan ay soo bandhigi doonto codad sir ah oo ay ka duubtay shaqsiyaad muhiim ah oo ka tirsan safaaradda.